အကောင်းဆုံး Collet ER Nut, ER အခွံမာသီး, ER32 Clamp Nut, တရုတ်အတွက် ER32 Collet Nut ထုတ်လုပ်သူ
Home > ထုတ်ကုန်များ > အခွံမာသီးER အခွံမာသီး
ER အခွံမာသီး ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Collet ER Nut, ER အခွံမာသီး ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ER32 Clamp Nut R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
မြင့်မားသောတိကျ ER Clamp အခွံမာသီးတစ်ဦးကအမျိုးအစား
မြင့်မားသောတိကျ ER16 ပြောင်းလဲနေသောချိန်ခွင်လျှာခွံမာသီး
DIN6499E Mills Chuck ဆောင်းပါးတွဲကို ER32 အခွံမာသီး
DIN6499 Mills Chuck ဆောင်းပါးတွဲကို ER32 အခွံမာသီး
DIN6499 Mills Chuck ဆောင်းပါးတွဲကို ER အခွံမာသီး
High Quality အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုအရောင် oz 25 အခွံမာသီး
High Quality ER 25UM အခွံမာသီး Silver, အရောင်
High Quality ER 32 um အခွံမာသီးက Black အရောင်
High Quality ER 16A အခွံမာသီး
CNC ထွင်းထုခြင်းနဲ့စက် ER Collets Nut ဖြတ်တောက်ခြင်း
ER32 Clamp Collet ER Nut
မြင့်မားသောတိကျ ER Clamp အခွံမာသီးတစ်ဦးကအမျိုးအစား Collet Chuck, အရည်အသွေးမြင့်နွေဦးသံမဏိ၏ရွေးချယ်ရေးတို့အတွက် ER16A Nut, ငြီးငွေ့စရာ, ကြိတ်, တူးဖော်ခြင်း, နှိပ်, ကြိတ်နှင့်ထွင်းထုအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အသုံးပြုအကွာအဝေး, မြင့်မားသောတိ, clamping, အင်အားသုံး clamping မြင့်မားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှု...
DIN6499E Mills Chuck ဆောင်းပါးတွဲကို ER32 အခွံမာသီး Collet Chuck, အရည်အသွေးမြင့်နွေဦးသံမဏိ၏ရွေးချယ်ရေးတို့အတွက် ER16A Nut, ငြီးငွေ့စရာ, ကြိတ်, တူးဖော်ခြင်း, နှိပ်, ကြိတ်နှင့်ထွင်းထုအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အသုံးပြုအကွာအဝေး, မြင့်မားသောတိ, clamping, အင်အားသုံး clamping မြင့်မားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှု...
DIN6499 Mills Chuck ဆောင်းပါးတွဲကို ER32 အခွံမာသီး 1. DIN6499 -D / E ကို 40Cr နှင့်အတူ 2. ER အခွံမာသီး 0.005mm အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 3. ER အခွံမာသီး Precision 4. ER အခွံမာသီး, ခိုင်မာသော HRC40 5. အမြင့်အကြမ်းခံ ER အခွံမာသီး collet Chuck နှင့် tool ကိုကိုင်ဆောင်သူသည်...
ER32 Clamp Collet ER Nut 1. DIN6499 -D / E ကို 40Cr နှင့်အတူ 2. ER အခွံမာသီး 0.005mm အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 3. ER အခွံမာသီး Precision 4. ER အခွံမာသီး, ခိုင်မာသော HRC40 5. အမြင့်အကြမ်းခံ ER အခွံမာသီး collet Chuck နှင့် tool ကိုကိုင်ဆောင်သူသည် 6. ကျနော်တို့ TELI Tool...
High Quality အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုအရောင် oz 25 အခွံမာသီး High Quality အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုအရောင် oz 25 အခွံမာသီး, အရည်အသွေးမြင့်နွေဦးသံမဏိ၏ရွေးချယ်ရေး, ငြီးငွေ့စရာ, ကြိတ်, တူးဖော်ခြင်း, နှိပ်, ကြိတ်နှင့်ထွင်းထုအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အသုံးပြုအကွာအဝေး, မြင့်မားသောတိ, clamping, အင်အားသုံး clamping...
High Quality ER 25UM အခွံမာသီး Silver, အရောင် ကုန်ပစ္စည်းများအားသာချက်များ 1.ER 16A အခွံမာသီး, antirust 2.ER 16A အခွံမာသီး, မျက်နှာပြင်၏မာကျောခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် 3.ER 16A အခွံမာသီး, cleaness ပိုကောင်း, တိကျမှန်ကန်မှုကိုတည်ငြိမ် 4.ER 16A အခွံမာသီး, ပိုမိုချောမွေ့ပေါ်လာ, ကောင်းတဲ့အဆင်ပြေ,...
High Quality ER 25 um အခွံမာသီး High Quality ER 25 um အခွံမာသီး, အရည်အသွေးမြင့်နွေဦးသံမဏိ၏ရွေးချယ်ရေး, ငြီးငွေ့စရာ, ကြိတ်, တူးဖော်ခြင်း, နှိပ်, ကြိတ်နှင့်ထွင်းထုအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အသုံးပြုအကွာအဝေး, မြင့်မားသောတိ, clamping, အင်အားသုံး clamping မြင့်မားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှု life.The ရှိပါတယ်။...
High Quality ER 16A အခွံမာသီး Collet Chuck, အရည်အသွေးမြင့်နွေဦးသံမဏိ၏ရွေးချယ်ရေးတို့အတွက် ER16A Nut, ငြီးငွေ့စရာ, ကြိတ်, တူးဖော်ခြင်း, နှိပ်, ကြိတ်နှင့်ထွင်းထုအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အသုံးပြုအကွာအဝေး, မြင့်မားသောတိ, clamping, အင်အားသုံး clamping မြင့်မားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှု life.The ရှိပါတယ်။...
CNC ထွင်းထုခြင်းနဲ့စက် ER Collets Nut ဖြတ်တောက်ခြင်း Collet Chuck, အရည်အသွေးမြင့်နွေဦးသံမဏိ၏ရွေးချယ်ရေးတို့အတွက် ER16A Nut, ငြီးငွေ့စရာ, ကြိတ်, တူးဖော်ခြင်း, နှိပ်, ကြိတ်နှင့်ထွင်းထုအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အသုံးပြုအကွာအဝေး, မြင့်မားသောတိ, clamping, အင်အားသုံး clamping မြင့်မားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှု...
တရုတ်နိုင်ငံ ER အခွံမာသီး ပေးသွင်း
ER8 ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 A / M / um အမျိုးအစား Clamp er collet ခွံမာသီး
1. DIN6499 -D / E ကို er ခွံမာသီး
0.005mm အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 3. Precision
4. HRC56-58 er ခွံမာသီး
collet Chuck နှင့် tool ကိုကိုင်ဆောင်သူသည် 6.
။ ပထမဦးဆုံးတိကျစွာ Tool ကိုရှင်အပါအဝင် CNC MachineTools များအတွက်အမျိုးမျိုးသောလက်ဆောင်စနစ်, နွေဦး Collets, Rough သို့မဟုတ် Precision ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များနှင့် Collets ထိခြင်းဖြစ်ပါသည်: SISHUI TELI Tool များ Manufacturing Co, LTD မှ3အမျိုးအစားများခွဲခြားနိုင်ပါတယ် Zone.Our ထုတ်ကုန် Developing SISHUI စီးပွားရေးဇုန်အတွက်တည်နေရာ ; ဒုတိယထိုကဲ့သို့သောတိုက်ရိုက်စင်တာများအမျိုးမျိုးတို့ကိုကဲ့သို့သောအခြားစံစက်ကိရိယာတခုဆက်စပ်ပစ္စည်း, Chuck, စသည်တို့ကိုလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ် .;
ER32 Clamp Nut